Sally England waa fanaanad Mareykan ah oo farshaxan fiber ah kuna nool kana shaqeysa Ojai, California. Markii ay ku soo barbaartay Midwest, waxay ka qaadatay shahaadada bachelor-ka ee farshaxanka warbaahinta Grand Canyon State University ee Michigan ka dibna shahaadada Masterka ee Farshaxanka iyo naqshadaynta ee Pacific Nor ...
Halloween, oo sidoo kale loo yaqaan 'All Saints' Day, waa fasax dhaqameed reer galbeedka ah 1-da Nofeembar sanad walba, iyo Oktoobar 31-keeda oo ku beegan maalinta Halloween waa waqtiga ugu firfircoon ee ciiddan. Waxaa jira noocyo badan o ...
Qurxinta qurxinta ee qolka carruurta
Qolalka carruurtu had iyo jeer waxay ahaayeen diiradda waalidiinta. Shuruudaha Aabaha iyo Hooyada ee ku saabsan agabyada qurxinta, qalabka guryaha iyo agabyada ayaa marba marka ka dambeysa sare usii kacaya. Alaabtayada dhogorta laga dareemay waa nooc kasta oo shuqul gacmeed laga sameeyay dhogor, oo noqon kara caruusado, ...
Qurxinta gidaarka, Qurxinta, Qurxinta Kirismaska, Qurxinta Guriga, Qurxinta, Darbiga Farshaxanka,